Isizinda se-Ultrasonic soshukela esivela ku-Sugar Beet cossette - Hielscher Ultrasound Technology
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kuthuthukisa umkhiqizo we-sucrose ekhishwe kushukela we-beet cossette futhi kunciphise ubude besikhathi senqubo yokususa. I-Sonication iyindlela elula nephephile, engahlanganiswa kalula nobuchwepheshe bamuva bokukhipha ukugeleza ukuze uthuthukise ukusebenza kahle kwesizinda.
I-Ultrasonic Sugar Beet cossette Isizinda
Ukukhishwa okusizwa yi-Ultrasound kusekelwe kumgomo osebenzayo we-acoustic noma we-ultrasonic cavitation. Imiphumela yemishini, ekhiqizwa yi-ultrasonical eyengezelwe i-ultrasonical, ibangela i-sono-pation nokuphazamiseka kwezindonga zeseli, okuthi kamuva kwandise ukuvela kwamamolekyuli aboshwe ngaphakathi kweseli. Ukusakazwa okubangelwe ngabomvu kanye nokususa okuncane okuchuma ngokuhamba kwesikhathi kuthuthukisa ukuhamba kwenqwaba kwenqubo yokukhishwa, ukuze ama-sucrose namanye ama-molecule adluliselwe ku-solvent, okungukuthi amanzi.
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kungafakwa ngezinyathelo ezahlukahlukene ngesikhathi sokukhishwa kwe-sucrose:
Ukwelashwa kwangaphambili kwe-Ultrasonic (ngaphambi kombhoshongo we-anti-yamanje)
Ukwenza i-Sonication ngesikhathi sokukhishwa kwe-countercusive
Ukwelashwa ngemuva kwe-Ultrasonic (ngemuva kombhoshongo ophikisana nawo wamanje)
Ngokuya ngesikhungo esikhona sokukhishwa, amatshe ekukhiqizwayo nendawo etholakalayo, i-sonication ingafakwa kalula njenge-pre-or post-ukwelashwa kanye nangesikhathi sokukhishwa kokugeleza kwe-countercusive.
Ultrasonic pre-Ukwelashwa kweShukela Beet Cossette
Ukwelashwa kwangaphambili kwe-Ultrasonic koshukela i-cossette kuyinqubo yokuqina. Izithasiselo ze-Ultrasonic zingahlanganiswa kalula nemibhoshongo yokukhipha ukugeleza kwe-counter-yamanje, esetshenziselwa ikakhulukazi isithako se-beet beet. I-sonication emfushane yama-cossette ashukela ngaphambi kokungena ohlelweni lokukhishwa kwe-counter-yamanje isiza ukuphazamisa nokuvula izindonga zeseli. I-Ultrasonication ikhuthaza ukudluliselwa kweningi phakathi kwe-solvent (ie, amanzi) nama-beet cossette, ukuze ama-molecule we-intracellular anjenge-sucrose adluliselwe kusuka engaphakathi esitokisini aye kwelanga. Ukwelashwa kwangaphambili kwe-ushukela we-beet beet kusiza futhi kusheshise ukukhishwa kwe-sucrose kwikholomu yokugeleza ye-counter-yamanje.
I-SEM (200 ×) yamasampula enoshukela i-beet cossette eyenziwe nge-400 W ngo-50 ° C isikhathi esingafaniyo sokukhishwa. A) ukuhamba kwe-cossettic okujwayelekile; B) ngemuva kwe-UAE kwemizuzu eyi-10; C) ngemuva kwe-UAE imizuzu engama-20; D) ngemuva kwe-UAE imizuzu engama-40. Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kuphazamisa izindonga zeseli futhi kukhiphe izinto ezi-intracellular.
Umthombo wesithombe: Fu et al., 2013
I-Ultrasonic Processor I-UIP4000hdT (4kW)
Ukuqhathanisa kwe-Ultrasonic vs Counter-yamanje Extraction
Fu et al. (2013) siqhathanisa isizinda sokugeleza kwe-counter-yamanje yokugeleza nesikhupha se-ultrasonic secroste kusuka kushukela beet cossette. Imiphumela yocwaningo ikhombisile ukuthi i-sonication iholele ekuvuneni okuphezulu kokuhlanzeka okuphezulu, ngenkathi isikhathi sokukhishwa sincishiswe kakhulu sisuka ku-70 min. (kubalwa) kuya kumaminithi angama-40. (sonication). Isizinda se-Ultrasonically esisize (i-UAE) siphumela ekujuleni kwenhliziyo yokungcola kwe-colloidal (ikakhulukazi ama-pectins), futhi sinikeza isivuno esiphakeme se-sucrose (94.0 ± 0.15%). Ijusi ekhishwe yokuhlanzeka okuphezulu (92,6 ± 0.11%). (cf. Fu et al., 2013)
Njengoba izindawo zokukhiqiza ushukela sezivele zifakwe imibhoshongo ejwayelekile yokukhishwa kwesibalo, inhlanganisela ye-sonnergistic sonication ekufakweni okukhona ivame ukuthandwa. Ukuze usebenzise isizinda se-ultrason sucrose ngendlela ebiza kakhulu futhi ngesikhathi esifanele, isizinda se-ultrasonic singafakwa njengokwelashwa kwe-synergistic ngaphambili, ngesikhathi, noma ngemuva kokukhishwa kokugeleza okuvamile okuhlobene. Njengoba i-sonication iphazamisa amangqamuzana kashukela futhi ikhipha i-sucrose kusuka kumaseli, isikhathi sokwelashwa kokugeleza okuphikisayo singancishiswa, ngenkathi isivuno se-sucrose sithuthukiswa.
Izinzuzo ze-Ultrasonic Sucrose Extraction
Imiphumela ye-Synergetic w / ukubalwa kwezinhlelo
Izinhlelo zokukhishwa kwe-Hielscher Ultrasonics 'zisetshenziswa emhlabeni wonke ekudleni nasapharma ekukhiqizweni kwezentengiso okusetshenziselwa izinto ezisezingeni eliphezulu ezisetshenziswa njengemikhiqizo yokudla, izithasiselo zokudla noma umuthi wemithi. Uma ufuna ukuvivinya nokwandisa amandla kwamapharamitha wokufaka we-Ultrason ku-bench-top level noma ufake uhlelo oluyisisekelo lokukhishwa kwe-Ultrasonics olukuzimboni ngokugcwele, i-Hielscher Ultrasonics ine-isethaphu efanelekile yokususa i-ultrasonic. Ukuphrinta okuncane konyawo nokukhethwa okuguqukayo okuvumelayo kuvumela ukulungele ukubuyela emuva ngisho nasendaweni yokucwilisa.
Imikhiqizo ebanga lokudla kufanele ikhiqizwe ngokuya nge-Okuhle Ukukhiqiza Izinto (i-GMP) nangaphansi kokucaciswa kokusebenza okuhlelekile. Izinhlelo ze-Hielscher Ultrasonics 'zokukhishwa kwedijithali ziza ne-software ehlakaniphile, eyenza kube lula ukusetha nokulawula inqubo ye-sonication ngokunembile. Ukuqoshwa kwedatha ye-othomathikhi kubhala yonke imingcele yenqubo ye-ultrasonic efana namandla e-ultrasound (inani eliphelele namandla e-net), amplitude, izinga lokushisa, ingcindezi (lapho izinzwa ze-temp kanye nezingcindezi zifakwa) ngedethi nesikhathi nesikhathi esakhelwe ku-SD-khadi. Lokhu kukuvumela ukuthi ubuyekeze kabusha inkatho ngayinye eyenziwe ngobunyoninco. Ngasikhathi sinye, ukuqinisekiswa kabusha kwekhwalithi ephezulu yomkhiqizo kuyaqinisekiswa.
ISufrose, eyaziwa nangokuthi ushukela wetafula, ikhiqizwa ikakhulukazi kusuka kumoba kanye nakuma-beet ashukela (Beta vulgaris). Ushukela, okusho ukuthi, i-sucrose, ukhishwa kuma-beet usebenzisa amanzi ashisayo kwinqubo yezinyathelo eziningi, lapho kukhishwa khona ujusi weshukela ongagcwele emfucumfucwini wamanzi ashisayo ohlelweni lokuhamba oluhamba kahle. Ngemuva kwalokho, ujusi weshukela ugxiliwe ngaphansi kwe-vacuum, kulandelwa ukugeza nge-cyclic bese ekugcineni komile.
Ngemuva kokuvunwa, izimpande ze-beet zihanjiswa kwisitshalo sokuhluza ushukela, lapho izimbotshana zigezwa khona bese zisikwa ngomshini zibe yimichilo emincanyana, okuthiwa ama-cossette. Ama-cossette anikezwa ohlelweni lokukhishwa kokugeleza okuhlobene manje. Uhlelo lokubala lusebenza ngokungafani nalutho futhi lufinyelela kokuqukethwe ushukela kusuka kuma-cossette lungene emanzini ashisayo.
Amasistimu wokuphamba we-countercusive angamasosha amade noma imibhoshongo ephezulu / amakholomu wamamitha ambalwa lapho i-cossette igeleza khonale kwicala elinye (phezulu) ngenkathi amanzi ashisayo egeleza ngaphesheya (ngaphansi komfula). Izitshalo zanamuhla zokukhishwa kombhoshongo zinamandla okusebenza afinyelela kumathani ayi-17,000 metric ngosuku. Isikhathi esijwayelekile sokugcinwa kwama-cossette embhoshongweni wokubala sisondele. I-90 min., Ngenkathi amanzi ehlala i-45 min kuphela. kukholomu e-diffuser. Inzuzo enkulu yezinhlelo zokuhamba zamanje zokunciphisa ukusetshenziswa kwamanzi okuncishisiwe uma kuqhathaniswa noshukela we-mac maceration ekushintsheni kwamanzi okushisayo. Isixazululo sejusi kashukela ekhiqizwa ohlelweni lokuphikisana nokwamanje olubizwa ngokuthi yijusi eluhlaza. Umbala wejusi eluhlaza ungahluka phakathi kokumnyama kuya kokubomvu okumnyama ngokuya ngezinga le-oxidation lawo.
Ama-cossette asetshenzisiwe aphuma ohlelweni lokufaka njenge-pulp ene-approx. Umswakama we-95%, kepha okuqukethwe okuphansi kwe-sucrose.
I-pulp enomswakama icindezelwa nge-screw Press ukuvuma. Umswakama ongama-75% wokuthola kabusha i-sucrose esele epulpini.
I-pulp esele esele yomisiwe futhi isetshenziswa ikakhulukazi njengokudla kwezilwane.
I-Carbonatation isetshenziselwa ukususa ukungcola kusuka ujusi ongavuthiwe ngaphambi kokuba inikezwe ngamakhristalu kashukela. Ngakho-ke, ijusi eluhlaza ixubene nobisi olushisayo we-lime, ie, ukumiswa kwe-calcium hydroxide emanzini. Ngesikhathi se-carbonatation, ukungcola okunjenge-sulfates, phosphates, citrate kanye ne-oxalates precipitate. Banika ngesimo se-calcium usawoti kanye nama-molecule amakhulu e-organic, isib. Amaprotheni, ama-pectin nama-saponin. Ngaphezu kwalokho, inani le-alkaline pH liguqula ushukela olulula noshukela kanye ne-fructose kanye ne-amino acid glutamine, ukwenza amakhemikhali ezinzile amakhemikhali e-carboxylic acid, angasuswa ngokuhamba kwesikhathi ngokuhlunga, ngoba lawo mamolekyuli angaphazamisa ukungena kwe-crystallization.
Esinyathelweni esilandelayo senqubo, ikhabhoni diokithamini igobhoza isisombululo sikashukela se-alkaline, inikeza ulamula njenge-calcium carbonate. Izinhlayiya ze-calcium carbonate zibopha ukungcola okuthile. Izinhlayiya ezisindayo zihlala ethangini futhi zingasuswa ngokuhlunga.Emva kwalezi zinyathelo zokuhlanza nokuzihlanza kutholakala lokho okubizwa ngokuthi ujusi omncane. Ijusi elincanyana lingahle liphathwe ngomlotha we-soda ukuze kulungiswe inani le-pH kanye nenhlanganisela esekwe yisibabule ukunciphisa umbala, okungenzeka ngenxa yokuwohloka kwe-monosaccharides eshisayo.
Umhwamuko usetshenziselwa ukugxilisa ijusi elincanyana usebenzisa amasistimu wokuhanjiswa kwemiphumela ehlukahlukene, ukuze ijusi elincanyana liphenduke ujusi obukhulu. Ujusi obukhulu une-approx. 60% sucrose ngesisindo.
Esinyathelweni sokugcina, ujusi obukhulu uphathwa kuma-crystallizer. Ngokwengeza noshukela okuphinda kusetshenziswwe kabusha, kukhiqizwa okubizwa ngokuthi ngotshwala kukamama. I-alcohol yotshwala ihlanganiswa kakhulu ngokubilisa ngaphansi kwe-vacuum emikhunjini emikhulu, eyaziwa ngokuthi amapani we-vacuum, kanye ne-crystal enhle kashukela kufakwa njengamaphoyinti wokutshala. Lezi zinhlayiya zikhula njengo ushukela ovela ezinhlotsheni zotshwala bomama ezibazungezile. Ingxube eyalandela yeshukela / isiraphu ibizwa ngokuthi yi-massecuite, igama elithi French wich lisho “isiga ophekiwe”. I-massecuite idliswa ibe yi-centrifuge, lapho i- "Green Green syrup" isuswa ku-massecuite ngamandla we-centrifugal. Ngemuva kwecentrifucagtion, amanzi abe esefafazwa ku-centrifuge ukugeza amakristalu kashukela, okhiqiza okuthiwa "Isiraphu Esiphansi". I-centrifuge ihamba ngesivinini esikhulu kakhulu ukuze yomise ingxenye yamakristalu. Lapho i-centrifuge incipha, ushukela luhlakulwa kusukela ezindongeni ze-centrifuge luhambise ohlelweni lokuhambisa ukuze lususe ushukela lube yi-granulator ejikelezayo lapho yomiswa ngumoya ofudumele. Izinhlayiya ezinoshukela ezomile, ezihlanzekile zikulungele ukuthengiswa kochwepheshe noma abenzi bokudla ukuze bathole ukwelashwa noma ukusetshenziswa.